Umhlahlandlela Wokugcina Wemali Wangempela WaseNingizimu Afrika 2020
Ikhaya / imishini yokugembula (slots) yemali yangempela
Imishini Yokugembula (Slots) Yemali Yangempela
Ingabe ucabanga ukuthi sekuyisikhathi sokuzama imishini yokugembula ngemali yangempela kodwa awunaso isiqiniseko sokuthi ukhethe muphi nokuthi yiliphi ikhasino elingcono ukudlala khona? Uma kunjalo, khona-ke usufike ekhasini elifanele. Siyaqonda kahle ukuthi kunjani ukuthatha isinyathelo sokuqala kumgembuli, ikakhulukazi kumuntu omusha ekugembuleni ku-inthanethi.
Ngenxa yalesi sizathu, sesiqoqe ikhasi elinzulu ngamakhasino angcono ukudlala khona imishini yokugembula, amabhonasi akwamuva ongawathola, kanye nakonke okudingayo ukuze wazi ukuthi isebenza kanjani imishini yokugembula. Qhubeka ufunde ukuze uqonde kabanzi ngalo mdlalo nokuthi uthole izimpendulo zemibuzo yonke evame ukubuzwa. Uma ufuna ukudlala manje, hlola uhlu lwethu olunconyiwe lwamakhasino ngezansi; siqinisekile ukubhala kuphela amakhasino aphephile nathembekile Anamabhonasi Okukwamukela amahle atholakala kubadlali abasha!
Ngaphambili kokuthi siqale ukuhlola ukuthi isebenza kanjani imishini yokugembula nokuthi yini okudingeka ukuthi abadlali bakubheke lapho bekhetha imishini yokugembula, asiqale siphendule umbuzo osezingqondweni zabantu: kungani udlale imishini yokugembula ngemali yangempela?
Imishini Yokugembula Yamahhala iqathaniswa Nemishini Yokugembula Yemali Yangempela
Empeleni, imishini yokugembula yamahhala ngeyokuzijabulisa kanti imishini yokugembula yemali yangempela ingakhokha imali enhle. Le mishini yokugembula ikhombise ukuthandwa kakhulu emakethe yaseNingizimu Afrika njengoba abadlali banethuba lokuwina imali yangempela.
Ake sibone umehluko phakathi kwalezi zinto zombili;
Imishini Yokugembula Yamahhala
Imishini Yokugembula Yemali Yangempela
Asikho isidingo sokubhalisa ukuze udlale Kunesidingo sokubhalisa ukuze udiphozithe nokuthi udlale
Asikho isidingo sediphozithi, uzokwazi ukufinyelela imali okungeyona yangempela ongadlala ngayo. Kudingeka ukuthi udiphozithe ngekhadi ukuze uhlele inani lokubheja ngaphambili kokudlala.
Awukwazi ukukhipha imali ngoba okuwinile akuyona imali yangempela Ungakhipha ukheshi noma imali oyiwinile uyifake ku-akhawunti oyithandayo ngokushesha eningi lamakhasino
Ayikho ingozi yokulahlekelwa yimali kodwa imnandi Iyajabulisa kakhu ngoba ubheja ngemali yangempela futhi unethuba lokuwina
Ilungele abaqalayo ukuze bazwe ukuthi kunjani ukudlala imishini yokugembula Abadlali abanesipiliyoni bangagembula ngemali yangempela futhi bazame inhlanhla yabo.
Indlela Imishini Yokugembula Esebenza Ngayo
Imishini yokugembula (slots) ilula kakhulu ukudlala – okumele ukwenze nje ukucindezela inkinobho ethi spin ukuze ama-reel aqale ukuphenduka. Kepha iqhinga ukuqonda okwenzeka naphakathi komshini, nokuthi iwini ibukeka ikanjani.
Ngakho-ke, ake siqale ekuqaleni. Njengoba kushiwo, umdlalo olula kakhulu; noma ngubani uzokwazi ukuwuqonda ngakho-ke imishini yokugembula iyindlela yokugembula ethandwayo kubagembuli baseNingizimu Afrika.
Njengoba sishilo, wonke umdlalo ulawulwa ngenkinobho ethi spin, ngakho-ke noma nini lapho icindezelwa, kubangela ukuthi ama-reel aqale ukuphenduka futhi ngemuva kwemizuzwana embalwa lawo ma-reel azoqala ukunciphisa ijubane bese ekugcineni ame kuzimpawu ezithile.
Ama-reels akhonjiswe emidlalweni adalwa ngokusebenzisa inhlanganisela yezimpawu ezahlukahlukene. Sizongena kulokho okushiwo yilezi zimpawu maduze.
Ukuze uwine futhi ukhiphe imali kumshini wokugembula, kufanele umise isondo kunhlanganisela yokuwina. Okunquma ukuthi amasondo ahlala nini futhi nakuziphi izimpawu, yinto enqunywa yi-chip. Umshini ngamunye une-chip ngaphakathi ebizwa nge-random number generator (rng), ehlanganisa izibalo zezibalo ngokushesha okukhulu ukunquma ukuthi iyiphi inhlanganisela engahleliwe yezimpawu okufanele ivele ku-reel slot kumsebenzisi. I-random number generator engahleliwe ayinayo imodyuli yememori efakiwe, okusho ukuthi ayikhumbuli ukuthi yiziphi izinhlanganisela eziboniswe ngaphambili ngakho-ke ayikwazi ukukhombisa inhlanganisela efanayo. Lokhu kuqinisekisa ukuthi ama-slots alungile futhi awanikezi ikhasino ithuba lokuthi lihlale liwina.
Ngaphambili kwe-spin ngayinye, umdlali uzobheja inani lemali, abazokwazi ukuwina ngalo uma izimpawu ezingu-3 noma ngaphezulu zikulayini owodwa. Inani lenani eliwiniwe lincike ku;
Ukuze ube ngumdlali onolwazi emishinini yokugembula ye-inthanethi, ukuqonda izimpawu ezakha umdlalo wemishini yokugembula kubalulekile. Nazi izimpawu ezintathu eziyinhloko ezitholakala kumageyimu emishini yokugembula:
I-Wilds iwuphawu oluvela kumshini wokugembula eyakudala, yevidiyo nama-slot aqhubekayo. Indima yayo ukushintshanisana nezinye izimpawu bese iqedela inhlanganisela yakho yokuwina. Ngokwesibonelo, uma unenhlanganiselo engunkawu-nkawu-nogwaja-nkawu-nkawu, ikhadi elingafani likanogwaja lingathatha isikhundla sophawu lukanogwaja ngenkawu ukwenza inhlanganisela ibe ngewinayo.
I-Scatter ngolunye uphawu olukhethekile. Ijwayele ukukhokha kungakhathalekile ukuthi ikuphi kuma-reel uma inani elanele lezimpawu selivelile. Ama-Scatter angabangela imidlalo yebhonasi noma imidlalo yamahhala futhi kwesinye isikhathi aletha izinkokhelo. Ezikhathini eziningi, ama-Wild awathathi indawo yama-Scatter.
Uma sikhuluma ngama-multipliers, sikhuluma ngezici zebhonasi ezandisa izinkokhelo zakho. Kwesinye isikhathi ama-Wilds asebenza njengama-multipliers ngokuphindaphinda yonke inkokhelo evela enhlanganisweni efakwe kuyo. Ama-multipliers angasebenza ngesikhathi udlala imidlalo yamahhala futhi. Kweminye imidlalo, eza njengomklomelo ngemuva kokuqeda izimfuneko ezithile njengokudlula amazinga.
Njengoba sibonile, lezi yizimpawu eziyinhloko zekhasino. Kubalulekile wazi ukuthi lezi zimpawu zingase zishintshe ukuze zifane nohlobo lwekhasino njengoba kungekho uhlobo olulodwa olukhona. Izinhlobo zebhonasi ezihlukile nezinkinobho ezikhethekile zikhona nakukhasino ngalinye okuyinto okufanele igcinwe engqondweni. Ngeminye imininingwane, sihlala sigqugquzela ukuthi ufunde kabanzi mayelana ne-slot ngaphambili kokudlala umdlalo. Imininingwane nemigomo nemibandela kuvame ukufinyeleleka kusikrini somdlalo ngokwaso.
Ukukunikeza isibonelo, sizobheka enye yama-slots, i- Frog Fortunes.
Njengoba ubona lapha, noma yiluphi ulwazi mayelana nama-slots lungatholakala kusithonjana semininingwane (i) ekhoneni elingezansi kwesobunxele.
Uma uchofoza kulesi sithonjana, iwindi lizovela eliqukethe konke odinga ukukwazi ngomdlalo we-slot. Ohlangothini lwesokudla, futhi ungaskrolela phansi ukuze ubone eminye imininingwane ngomdlalo. Uma usuqedile ukubuka lokhu, ungachofoza inkinobho ethi “Emuva” kwesokunxele kwesikrini bese ubuyela kumdlalo wakho.
Nokho, kubalulekile ukukhumbula ukuthi yonke imidlalo ye-slot izohluka futhi ungase uthole ukuthi lezi zinkinobho noma izithonjana azihlali zitholakala endaweni efanayo, kodwa lokhu kukunika umbono kangcono ukuthi yini okumele siyibheke, nokuthi ungakuthola kuphi, lapho ufuna ukufunda nge-slot.
RTP (Buyisela Kumdlali) – Iyini, futhi kungani ibalulekile?
Enye into ebalulekile ngama-slots ukubuyisela kumdlali (RTP). Leli inani elibuyiselwa emuva kumdlali emuva kokudlala izikhathi eziningi, okusho ukuthi ithuba lakho lokuwina. Ngokwesibonelo; uma i-slot linembuyiselo engu-94% kumdlali, lokho kusho ukuthi ngo-R100 ofakiwe, u-R94 kulindeleke ukuthi ubuyele kumdlali.
Kubalulekile ukukhumbula, kepha, ukuthi leli phesenti libalwa ngemuva kwezikhathi eziningi zokudlala – sikhuluma ngezigidi, okusho ukuthi noma yini ngempela ingenzeka noma nini udlala. Okubalulekile kuwe ukuthi ukwazi ngukuthi ngokuvamile, imishini yokugembula ye-inthanethi ene-RTP kusho ukuthi noma yini ingenzeka noma nini udlala. Okubalulekile kuwe ukuthi ukwazi ukuthi ngokuvamile, imishini yokugembula ye-inthanethi ene-RTP engaphansi kuka-96% ivame ukubhekwa njengokubi.
Ngakho-ke, uma usuzonquma igeyimu yomshini wokugembula, qinisekisa ukuhlola i-RTP yayo. Sincoma ukuthi ukhethe amageyimu ane-RTP ephezulu kuno-96% ukwandisa amathuba akho okuwina. Ngokuyinhloko, kungcono uma kunamaphesenti amaniningi.
Kulula kakhulu ukuhlola i-RTP yomshini wokugembula; njengoba kuchaziwe ngenhla amageyimu amaninigi emishini yokugembula izoba nesithonjana semininingwane (i) kusikrini. Uma uchofoza kulesi sithonjana, uzothola lonke ulwazi oludingayo mayelana nomshini wokugembula – njengezimpawu, isici sebhonasi, inhlanganisela yokuwina ne-RTP.
Izinhlobohlobo Zemishini Yokugembula
Manje njengoba usujwayelene kakhulu nokuthi imishini yokugembula isebenza kanjani kanye nezimpawu, uyazi izimpawu nokuthi kudlalwa kanjani, sizoqhubeka ngokubhekisisa izinhlobo ezehlukene zemishini yokugembula ekhona. Lokhu kuhlukaniswa kuzokusiza ukhethe igeyimu ekufanele lapho unquma ukuthi umuphi umdlalo ozowudlala. Lapho ukhetha ukudlala umshini wokugembula. Imishini yokugembula ibandakanya:
Imishini Yokugembula Yakudala (Classic Slots)
Yaziwa nge-3-reel slot machines. Le mishini idlala ngama-reels angu-3 futhi isebenzisa izimpawu zakudala, njengemishini yokugembula yakudala etholaka kumakhasino asezakhiweni. Azokunikeza isipiliyoni sokugembula sakudala futhi ijwayele ukukhokha imali eniningi.
Imishini Yokugembula Yevidiyo (Video Slots)
Imishini yokugembula yevidiyo inama-reel angu-5 nolayini abangu-3 noma u-4. Esikhundleni samalayini akhokhelayo angu-1 noma u-3 anikewza imishini yokugembula yakudala, imishini yokugembula yevidiyo ikunikeza amathuba amaningi okuwina ngenxa yamalayini akhokhelayo angeziwe. Zinengqikithi futhi ngezinye izikhathi indaba esemshinini wokugembula ingaba mnandi uze uzibone uchitha amahora amaningi udlala ama-reels.
Imishini Yokugembula Yenkokhelo Ekhula Njalo (Progressive Slots)
Imishini yokugembula yenkokhelo ekhula njalo ayihlukile kakhulu nemishini yokugembula yevidiyo uma sikhuluma ngokudlala. Okuyenza ikhethekile ngukuthi ungawina isizumbulu semali noma nini udlala. Isizumbulu semali ekhula njalo singakhuphuka size sifike kunani elihlanyisayo ngoba singaba yingxenye yenethiwekhi ekhula njalo. Ngokwesibonelo, inethiwekhi ekhula njalo yilapho imishini eminingi yokugembula evela kumakhasino amaningi ihlanganiswa ukudala i-jackpot eyodwa enkulu. Uma kunjalo, ukubheja kanye amageyimu avela kunethiwekhi kunikela echibini lomklomelo imiklomelo ekhokhelwa kulo. Kunezinhlobo ezingu-3 zemishini yokugembula yenkokhelo ekhula njalo;
Imishini Yokugembula Yenkokhelo Ekhula Njalo Ezimele (Standalone Progressives)
Njengoba igama lisho, umshini awuxhunyiwe neminye futhi unenani elinqunyiwe le-jackpot. Isizumbulu semali ekhula njalo eqhubekayo isebenzisa amanani athile ezinhlamvu zemali ebelokhu zidlala ukudala umklomelo wenhlanganisela enkulu wokuwina yezimpawu.
Imishini Yokugembula Yenkokhelo Ekhula Njalo Yendawo (Local Progressives)
Imishini yokugembula yenkokhelo ekhula njalo yasekhasino eyodwa ixhunyiwe. Lokhu kungahlanganisa imishini yokugembula embalwa noma emningi ngokuya kwekhasino. Lawa ma-jackpot makhulu njengoba iqoqo lamabhonasi manje selikhuphukele kuyo yonke imishini yasendaweni exhunyiwe.
Imishini Yokugembula Yenkokhelo Ekhula Njalo Yendawo Ebanzi (Wide Area Progressive)
Imishini yokugembula yenkokhelo ekhula njalo yendawo ebanzi ihlanganisa ama-jackpots endawo nawakwezinye izindawo. Le mishini ingabala amakhasino ahlukile ngakho-ke ikhulisa inani umgebuli angayiwina. Futhi, le nhlanganisela iya ngekhasino kanye nesivumelwano esibhaliwe.
Izinqubo Zokuphathwa Ngokulungile
Abahlinzeki bemishini yokugembula bakuthatha ngokungathi sina futhi nathi senza kanjalo e-Online Casinos Online. Njengoba kushiwo ngaphambili, yonke imishini yokugembula isebenzisa irandom number generator (RNG) esusa noma yibuphi ubandlululo noma iphutha lomuntu. Le midlalo inohlelo lokwenza izinombolo ezingahleliwe ehlukaniswe negeyimu. Eminye imidlalo ezisebenzisa ubuchwepheshe obufanayo yi-keno number, i-poker (kumakhadi ayo) kanye nezimpawu zemishini yokugembula.
Ukudlala imidlalo ngeselula kuthuthuke kakhulu, kulezi zinsuku iningi lamakhasino ahamba phambili anikela ngokugembula okuhamba phambili, okutholakala kuyo yonke iNingizimu Afrika. Lawa mawebhusayithi asebenzisa i-html5 eguqulela iwebhusayithi kumidlalo yeselula noma kunoma iyiphi isofthiwe esetshenziswayo. Emazweni amaningi kubandakanya iNingizimu Afrika, imidlalo yeselula iyindlela eyinhloko yokugembula. Abahlinzeki besofthiwe abazinikele ekukhiqizeni imishini yokugembula baziqonde izidingo zemakethe.
Njengoba izakhamuzi eziningi zaseNingizimu Afrika zisebenzisa amadivayisi eselula, amakhasino eselula ahlinzeka ngemishini yokugembula yemali yangempela engadlalwa uhamba. Amadivayisi eselula asekelwayo ezimeni eziningi abandakanya amaselula ahlakaniphile namathabulethi asebensisa i-Android ne-iOS. Amakhasino amaningi aseNingizimu Afrika asekela amadivayisi aphathwayo e-Windows Phone ne-Blackberry. Zonke izici zemishini yokugembula ziyagcinwa ezikhathi eziningi, ikakhulukazi izici zebhonasi ezingakusiza uwine okukhulu nomaphi lapho ukhona.
Ukucubungula Ukukhokha Okuvikelekile Nokuthembekile
Manje amakhasino ahamba phambili amukela izindlela eziningi zokudiphozitha ezicubungula ngokushesha. Futhi, izindlela zokukhipha imali sezingcono ngoba zinikeza abadlali amandla okusebenzisa izindlela zokukhokha ezingase zinikeze umsebenzisi izinzuzo ezahlukahlukene. Olunye ulwazi mayelana nalokho okwenziwe ngcono okunikeza abadlali amandla okusebenzisa izindlela zokukhokha ezingase zinikeze umsebenzisi izinzuzo ezahlukahlukene. Ulwazi oluthe xaxa ngezinye zezindlela zokukhokha ezinikezwayo lungatholakala lapha
I-Online Casinos Online Ibuyekeza Kanjani Imidlalo Yemishini Yokugembula?
Yini eyenza umshini wokugembula ufanele ukudlalwa? Lona ngumbuzo onzima kakhulu njengoba uhlanganisa izici eziningi ezifana nokubukeka nokusebenza bomdlalo. Ngokuvamile, umshini owodwa wokugembula awufaneli kahle abantu ababili. Yingakho sinake yonke imininingwane ngokudlala umdlalo nokufunda indaba ngomshini wokugembula. Lokhu kusiza abafundi bethu ukuthola imidlalo ehambelana nalokho abakuthandayo.
Into ebukeka njengomshini wokugembula yinto yokuqala ozoyibona lapho uqala umdlalo. Namuhla, imishini yokugembula iziqhayisa ngezithombe ezihehayo ezihambisana nezindikimba zayo. Kanye nengoma nemisindo, ihlela isimo somdlalo. Lokhu kungaba yisivivinyo sokuqala sokubheka uma ngabe umshini wokugembula ufanelwe ukudlala noma cha. Lapho usuvuma indlela umdlalo obukeka ngayo nokuthi udlala kanjani, kufanele uhlole ukusebenza kwawo.
Mayelana nokusebenza, kubalulekile ukuthi umdlalo unikeze ukudlala okubushelelezi, isikrini esisebenziseka kalula, kanye namathuba amaningi okuwina. Imishini yokugembula yevidiyo ivame ukudlalwa kuma-reel angu-5 nolayini abakhokhayo abaningi abahlelekile noma abashintshwayo. Olayini bayahlukahluka ngokuya ngemidlalo. Kodwa-ke, uma olayini abakhokha kakhulu noma izindlela zokuwina ziningi, makhulu amathuba okuwina -, kufanele ukukhumbule lokhu!
Enye into eshintsha amathuba okuwina womshini wokugembula yizici zebhonasi. Lokhu kubandakanya; imidlalo yebhonasi, izikhathi zokudlala mahhala nenani elingawinwa ngabadlali. Lezi zici zingaba yinto entsha nezuzisayo, ngaleyo ndlela zengeze injabulo enkulu ekudlaleni futhi zikhulise amathuba akho okuwina ngasikhathi sinye. Esinye nesinye sezibuyekezo zethu sikunikeza ulwazi lwezici zebhonasi enikezwa ngumshini wokugembula, ukuze wazi kalula ukuthi ingabe ukufanele na umdlalo nokuthi awumoshi isikhathi nemali yakho. Ngaphezulu kwalokho, ungathola imininingwane yesizumbulu semali esingaguquki, isizumbulu semali esikhula njalo neminye imiklomelo efanelwe ukuqanjwa. Ungahlola isibuyekezo somdlalo lapha, lapho uzokwazi nokuzama umdlalo mahhala!
Yini eyenza imishini yokugembula ithandwe kakhulu kumidlalo yasekhasino?
Imishini yokugembula ithandwa kakhulu njengoba iyimidlalo yenhlanhla engajatshulelwa ngabadlali abaqalayo nabajwayele. Ayibizi kuzo zonke izinhlobo zabadlali. Abanenhlanhla kakhulu bangashaya eminye imiklomelo emikhulu ngesikhathi bedlala kanye. Amakhasino e-inthanethi neselula aseNingizimu Afrika ahlinzeka ngamabhonasi akhethekile namaphromoshini kumidlalo yemishini yokugembula.
Ingabe imishini yokugembula ilungile?
Imidlalo yemishini yokugembula ihlinzekwa yizinkampani zemidlalo ezihloniphekile alunge ngo-100%. Zonke zisebenzisa i-Random Number Generator (RNG)
eqinisekisa imiphumela eqondile nengachemile. Ama-RNG nemishini yokugembula ivivinywa njalo ngabacwaningi mabhuku abazimele abaqinisekisa
ukuthi imidlalo ithembekile nokuthi ilungile.
Ingabe imidlalo yemishini ilungele abaqalayo?
Imishini yokugembula ilungele abaqalayo ngoba ayidingi amakhono akhethekile noma isu lokuyidlala. Noma kunjalo, abaqalayo kufanele
bahlele ngokuhlakanipha inani abzoligembula futhi banamathele kunani elivunywa yisikhwama sabo.
Yimiphi imidlalo yemishini yokugembula ezuzisa kakhulu?
Kunzima ukunikeza impendulo emfushane kulo mbuzo njengoba kunezici eziningi imiphumela yakho engancika kuzo. Lapho ufuna umshini wokugembula, kufanele unake i-RTP (ukubuyisela kumdlali) yayo. Leli gama lisetshenziswa ngamakhasino ukuchaza ukuthi ingakanani imali ebhejwa emshinini wokugembula eyobuyiselwa kuwe. Leli yinani lokucatshangelwa, kepha empeleni lisho ukuthi uma ubheja u-R100 kumdlalo womshini wokugembula one-RTP engu-95%, ungalindela ukuthola u-R95 ekukhokhelweni kwakho.
Ungayithola kanjani imishini yokugembula esanda kwethulwa?
Esikhundleni sokusesha imishini yokugembula emisha uwedwa, hlala nathi futhi uzokwaziswa ngemishini yokugembula esanda kwethulwa ngamakhasino aseNingizimu Afrika. Funda izibuyekezo zethu futhi ufunde ukudlala kahle imishini yokugembula yemali yangempela nathi.
Yimiphi imishini yokugembula ye-inthanethi ekhokha imali yangempela?
Wonke amakhasino okukhulunywe ngawo ekubuyekezweni okungenhla akhokha imali yangempela. Okuwinile kungakhishwa ngokusebenzisa izindlela ezifana nezindlela ezingenhla noma nganoma iyiphi indlela umsebenzisi afisa ngayo. Eziningi zalezi zindlela ziphephile futhi azikhokhiswa.
Zingaki izimpawu ezikhona emshinini wokugembula?
Ngesikhathi imishini yokugembula idalwa, yayisebenzisa izimpawu ezingu-5 kuphela, kulezi nsuku ziningi izimpawu, cishe ezingu-10.